महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाशको भिडन्त कसले मर्ला बाजी ? — Imandarmedia.com
महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाशको भिडन्त कसले मर्ला बाजी ?
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महामन्त्री पदमा चुनाव लड्ने औपचारिक घोषणा गरेका छन्। बिपी कोइरालाको जन्मजयन्तीको अवसरमा सुन्दरीजल पुगेर शर्माले १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री उठ्ने घोषणा गरेका हुन्। आज बिपीको १०८ औं जन्मजयन्ती हो। सुन्दरीजलमा बिपी संग्रहालय छ, यहाँ कांग्रेसका संस्थापक नेताहरूको शालिक छ।
शर्माले बिपी, गणेशमान र किसुनजीको सालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए। सुन्दरीजल संग्रहालयलाई कांग्रेसको जीवित इतिहास पनि भन्ने गरिन्छ। शर्माले बिहीबार दिउँसो १ बजेर ७ मिनेटको शुभ साइतमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए। सो अवसरमा शर्माले रूद्राक्षको विरूवा पनि रोपेका छन्।
शर्माले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने थाहा पाएपछि स्थानीय नेता/कार्यकर्ता पनि सुन्दरीजलमा उपस्थित भएका थिए। त्यही शर्माले छोटो सम्बोधन गर्दै आफू महामन्त्री पदमा उठ्ने घोषणा गरेका हुन्। आफू महामन्त्री बने नेपाली कांग्रेसलाई लगातार तीन आमनिर्वाचन जिताउन भूमिका खेल्ने संकल्प शर्माको थियो। यस्तै संकल्प पहिले बिपी कोइरालाले पनि लिएको तर त्यसबेला पूरा हुन नसकेको शर्मा बताउँछन्।
‘बिपीले देश समृद्ध बनाउने हो भने तीनपटक लगातार कांग्रेसले जित्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले एकपटक जित्ने अर्को पटक हार्ने भएको छ,’ शर्माले भने, ‘कांग्रेसभित्र भएका सबै साथीहरूलाई एकजुट बनाएर लगातार तीन वटा आमनिर्वाचन जिताउने संकल्प लिएर मैले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु।’
बिपीले २०३४ सालतिर सुन्दरीजलमा कपुरको विरूवा रोपेका थिए। त्यो बिरूवा हुर्केर ठूलो रूख बनिसकेको छ। त्यही कपुरको बोटमा शर्माले पानी सिँचित पनि गरेका थिए। सुन्दरीजलमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले पनि कपुरका बिरूवा रोपेका थिए।
प्रवक्ता शर्मा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट छन्। उनी २०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य चुनिएका थिए। शर्मालाई सभापति देउवाले पार्टीको प्रवक्ता बनाएका हुन्। सभापतिमा फेरि यसपटक पनि देउवा उठ्ने तयारीमा छन्। देउवाकै टिमबाट शर्मा महामन्त्रीमा चुनाव लड्न लागेका छन्।
झापाका शर्मा नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्। उनले समाजशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनी कलिलै उमेर २०३७ देखि नै नेविसंघको राजनीतिमा लागेका थिए। राजनीतिसँगै शर्मा साहित्य र गीतसंगीतका क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन्।
शर्माले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै यसपालि कांग्रेस महाधिवेशन रोचक हुने देखिएको छ। कांग्रेसका युवा नेताहरू यो पटक महामन्त्री पदमा आमनेसामने हुने भएका छन्। महामन्त्रीमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापा र प्रदीप पौडेल पनि लड्ने तयारीमा छन्। थापाले त भदौ १४ मै महामन्त्री पदमा लड्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन्।
यसै गरि , सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका बेला नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नगर्न माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गरिदिएको छकांग्रेस बागमती प्रदेश सभा सदस्य रहेका नरोत्तम वैद्यले गत हप्ता दायर गरेको रिट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
वैद्यले कोरोना महामारी भएकाले महाधिवेशन केही समय पर सार्न माग गरेका थिए। ‘महाधिवेशन रोक्ने मेरो माग होइन, कोरोना महामारी छ केही समय पर सारौं भन्ने हो,’ वैद्यले भने, ‘कोरोना कम होस्। सबै नेपालीले खोप लगाउने वातावरण मिलेपछि भव्यताका साथ महाधिवेशन गरौं।’आफूले सर्वोच्चमा रिट दिएर १४ औं महाधिवेशन रोक्न नखोजेको उनले दाबी गरेका छन्।
कांग्रेस महाधिवेशनमा भिडभाड हुन्छ, यसले कोरोना नफैलाओस्,’ उनले भने।कांग्रेसको वडा अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरू भएको थियो। नगर/गाउँ पालिकाको महाधिवेशन २७ गते हुँदै छ भने केन्द्रीय महाधिवेशन भने मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म छ।